Indlela yokwenza isilogeni: yintoni isilogeni kunye nendlela yokuyidala ngokwamanqanaba ahlukeneyo | Abadali be-Intanethi
Kwicandelo leentengiso, bekusoloko kukho iintloko ezincinci, ezenziwe ngamagama ama-2 ukuya kwangama-5, ashwankathele yonke into umbukeli afuna ukuyazi kwisivakalisi esinye esincinci. Siyazi eli binzana njengesilogeni kwaye kuqhelekile ukulibona kwintengiso nganye okanye kuphawu oluthile.
Kodwa, kule posi asizanga ukuthetha malunga neentengiso, nangona siza kuthetha. Kodwa kunokuba isilogeni. Kwimeko apho ubuhlala uzibuza ukuba ungayiyila njani enye, sikulethela ezona zitshixo zibalaseleyo kunye neengcebiso zokwenza. Lungiselela isiqwenga sephepha kunye nosiba kwaye ubhale phantsi yonke into ezayo kuba iya kuba nomdla kakhulu kuwe.
1 Isilogeni: yintoni
2 Indlela yokuyila isilogeni
2.1 Yenza uphawu
2.2 Thatha ixesha lakho
2.4 Gxila kumyalezo kuphela
2.5 Sebenzisa izinto ezifana nemvano-siphelo okanye isingqisho
3 Iintlobo zesilogeni
3.3 iimfuno ezijoliswe
3.4 ezijoliswe eluntwini
Isilogeni, njengoko besesitshilo ngaphambili, Kwaziwa njengoluhlobo lwebinzana elifutshane elinjongo yalo iphambili kukushwankathela umyalezo ngamagama ambalwa kwaye, ngaphezu kwako konke, ukukhumbuleka. Isilogeni esihle siyilwe ngokuchanekileyo ukuba kulula ukukhumbula, ukuba nasemva kokubona iintengiso ezingaphezu kwesihlanu ngokulandelelana sisakwazi ukukhumbula. Njengoko sele sithathele ingqalelo, isilogeni sikhona kakhulu kwintsimi yentengiso, nangona isoloko ineenjongo ezahlukeneyo, umzekelo, iphinda idibaniswe ngokusondeleyo nezopolitiko okanye iinjongo zorhwebo.
Ngokufutshane, isilogeni siyinto ebaluleke kakhulu eshwankathela umyalezo othile wentengiso. Ngesi sizathu, sihlala sikholisa ukuyifumana kwezinye iibrendi. Kukho iibrendi ezithi, emva kokudala into esiyaziyo njengesazisi senkampani, zikwayile isilogeni esifutshane esiya kusebenza njengesalathiso sokubamba ingqalelo yoluntu kwaye sinxibelelene nophawu. Ngezantsi siza kuchaza imisebenzi ephambili yesilogeni kunye nezinye zezona mpawu zibalaseleyo, ukuze uqonde ukusuka kumzuzu wokuqala ukuba zineempembelelo kunye nokuba yintoni umphumo obangelwa kumajelo ahlukeneyo.
Eyona njongo iphambili yesilogeni kukutsala umdla woluntu. Ke ngoko, kufuneka isebenze ukusuka kumzuzu wokuqala ukuyilwa, ekubeni imele ikhunjulwe ngabo bonke abaphulaphuli. Ngale ndlela, imalunga nokuzuza ukubonakala okukhulu nangaphezulu kuzo zombini imveliso kunye nophawu olubhengezwayo. Kodwa ngaphezu kwayo yonke into, kufuneka iqinisekise uluntu ukuba imveliso ethengiswayo ibalulekile kwaye iyahlangabezana neemfuno ezikhankanywa luphawu.
isilogeni kufuneka ibemfutshane kwaye ibemfutshane kangangoko. Ke ngoko, kufuneka yenziwe kuphela ngamagama amabini ukuya kwama-5.
Kwakhona kufuneka ithathe amehlo, kufuneka ifake igalelo ukutsalela ingqalelo yoluntu lonke oluyifundayo kwaye kufuneka ibakhuthaze ukuba bathenge imveliso ekhuthazwayo.
Ukuze onke amaqela aphumelele, isilogeni kufuneka sicace kwaye singqale. Umyalezo oxhokonxa yonke into ofuna ukuyithetha ngamagama ama-4 okanye ama-2. Ukwenza oku, kufuneka siqale sicinge ngento esifuna ukuyithetha kwabanye.
Isilogeni esihle sikwanjalo into enomtsalane kwiimvakalelo, abaninzi abalungileyo nababi. Ngenxa yesi sizathu, kufuneka idlulise iimvakalelo kunye neemvakalelo ezahlukeneyo.
Xa siyila isilogeni Kuthathelwa ingqalelo ukuba kuyindalo kunye nentsusa. Ezona zilogeni ziphawulwa ngaloo nto.
Indlela yokuyila isilogeni
Ngaphambi kokungena ukuyila isilogeni esinokwenzeka, kodwa okokuqala kufuneka siyile i-brand. Uphawu luhlala luza kuqala kuba luya kuba yinto eya kunika umlinganiswa kunye nomyalezo kwisilogeni. Akukho slogan ngaphandle kwe-brand kunye ne-brand ngaphandle kwe-slogan. Ke ngoko, yinto ekufuneka siyicace kwasekuqaleni. Ukuqaliswa ngesilogeni ngaphandle kokuyila i-logo yimpazamo, kwaye nangona kunokubonakala kungaqhelekanga ukubona, iibrendi ezininzi ziyenzile kwimbali yonke.
Thatha ixesha lakho
Isilogeni asiyonto eyilwe emva kwemini, okanye nangosuku. Kodwa unokuchitha iinyanga kunye neenyanga usebenza ukwenza isilogeni. Phambi kwesilogeni, kukho inqanaba lokuqala lophando kuphawu oza kuyilwa. Kule nto, kuyimfuneko ukuba uzixhobise ngomonde, kuba isilogeni asiyi kuphuma ekuqaleni kwaye kuya kufuneka uqhube iimvavanyo ezininzi kunye nemizobo, njengokungathi i-logo.
Elinye icebiso esikunika lona lelokuba xa uneslogan okanye isilogeni esinokubakho, zigcine kude kube sekupheleni. Musa ukuzisusa okanye uzilahle ngokulula, kuba ekuhambeni kwexesha zisenokuphinda zibaluleke kwakhona. Emva koko, ayisiyiyo imizobo egcina iipatheni ezifanayo, kodwa kunokuba sithetha ngeengcamango, ngamagama aguqulwayo ukunika intsingiselo kwabanye abaninzi. Ngesi sizathu, la magama okanye iikhonsepthi ziphinda zikhule ngokuhamba kwexesha ngokungathi ziibhetri kwaye zinokuphinda zisetyenziswe ukunika intsingiselo kwinto oyenzayo.
Gxila kumyalezo kuphela
Kubekho iibrendi eziye zaphambuka kude kwinto efunwa yinkampani ngokwayo ukunxibelelana nabaphulaphuli kunye nababukeli. Ke ngoko, siyakwazisa ukuba umyalezo kufuneka uhlale usengqondweni yakho. Kuya kufuneka wazi ukuba yonke into oyiyileyo iya kubhalelwa umyalezo ofuna ukuwunikezela kwabanye. Ke ngoko, kubalulekile ukuba uyazi indlela yokuqonda into ofuna ukuyithetha kwaye uyixelele ukusuka kumzuzu wokuqala oyilwayo. Kufuneka unike isizathu kunye nocwangco kuyo yonke into oyenzayo. Ngokuhamba kwexesha uya kuqonda ukuba ibalulekile kwibhrendi yakho.
Sebenzisa izinto ezifana nemvano-siphelo okanye isingqisho
Emva kokwenza iikhonsepthi ezibanzi kunye nokuzimanya. Kuya kufuneka ukuba ube nemvano-siphelo enokubakho okanye isingqisho engqondweni. Kungqinwe ngokwenzululwazi ukuba ezona slogani zezo zinemvano-siphelo encinane okanye isingqisho phakathi koonobumba. Ewe, ingoma okanye isandi kulula ukuhlala ezingqondweni zethu ixesha elide kunesilogeni esilula. Apha kulapho imvelaphi kunye nokuyila ukuba uphawu ngalunye lufuna ukunika isilogeni salo. Kuyacetyiswa ukuba uzithathele ingqalelo ezi zinto.
Izilogeni zokwahlula, Njengoko amagama abo ebonisa, bazama ukwahlula uphawu olukhuthaza imveliso kulo lonke ukhuphiswano lwayo. Ngale ndlela, idwelisa eyona ilungileyo ngaphambi kokunye. Yile nto i-brand ezifana ne-Telepizza zenza kunye nesiqubulo sazo esithi "imfihlo ikwintlama" ngale ndlela ishiya umbukeli elindele ukwazi ukuba yintoni esemva kwemveliso kwaye yenza ukuba uphawu luvelele kwiimveliso zalo ezikhethekileyo nezingenakulinganiswa. Sislogan isicwangciso esihle kwiimpawu ezifuna ukugqama kumgangatho weemveliso zazo.
Izilogeni ezifundisayo zizama ukwazisa umbukeli ngento eyenziwa luphawu. yintoni eyenzayo okanye imveliso eyithengisayo. Ngoko, zininzi iibrendi ezikwazisa ngento eyenziwa yimveliso yazo okanye zeziphi iinjongo abahlangabezana nazo okanye abazifunayo. Ikwayindlela elungileyo ukuba awukayicacisi kubaphulaphuli bakho into eyenziwa yi-brand yakho kunye neenjongo zayo eziphambili kwimarike. Ngamagama ama-4 nje ungayenza kwaye awuvelisi nakuphi na ukuthandabuza kuye nabani na onomdla kwimveliso okanye uphawu lwakho.
Kukho izilogeni ezithi ziyilelwe ngokukodwa ukuxelela uluntu ukuba zeziphi iimfuno ezihlangatyezwayo xa loo mveliso ithile isetyenzisiwe. Umzekelo ocacileyo wokuba uqonde ngcono yinto eyenziwa nguKit Kat, uphawu oluvelisa imivalo yetshokolethi, idume ngesilogeni sayo esithi "yiba nekhefu, yiba neKit kat", apho izama ukuxelela umthengi ukuba le mveliso iyimfuneko ukuba uthatha ikhefu phakathi kwesiqhelo kunye nesiqhelo. Indlela elungileyo yokukhuthaza uluntu ukuba luyitye kwaye ibe nesizathu esihle sokwenza oko.
Kwaye okokugqibela kodwa okungancinci, kukho iziqubulo okanye iibrendi ezijongana nabaphulaphuli babo kuphela. Yiloo nto eyenzekayo xa sibona intengiso apho uphawu lujoliswe kwi-makeup okanye icandelo le-perfumery. Ngesi sizathu, bayila iziqubulo apho umthengi ekhona kakhulu kubo. Ukongeza, ezi zilogeni ziyindlela elungileyo yokutsala umdla woluntu kuba zikuxelela kumntu wokuqala ukuba zijolise kubani, ukuze umphulaphuli okanye umbukeli atsaleleke kwimveliso ethile.
Kukho iintlobo ezininzi zeeslogani ezikhoyo, kodwa kolu luhlu luncinci sifake ezona zifanelekileyo.
I-slogans sele ikwishishini lentengiso ixesha elide kwaye ziya zifunwa kakhulu ziimpawu ezininzi. Kukho iibrendi eziye zehla kwimbali okanye ziye zazibeka kwindawo yokuthengisa ngenxa yoyilo lwezilogeni zabo. Ke ngoko, isilogeni esilungileyo kufuneka siqale kwamanye amacebiso esiwacetyisiweyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba uzithathele ingqalelo kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ophefumlelweyo kwaye uxelelwe ngayo ngaphambi kokuba uzenze. Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga nezilogeni kwaye ziya kusebenza njengesalathiso sokwenza eyakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokwenza isilogeni